TPLF oo jihooyin cusub ka furtay dagaalka, weerarna ku qaaday maamullo kale | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta TPLF oo jihooyin cusub ka furtay dagaalka, weerarna ku qaaday maamullo kale
Abiy Axmed ayaa tallaabadaas ku micneeyey inay jawaab u tahay weeraradii banaadirsom TPLF ay ku qaaday xeryaha ciidamada dawlada dhexe ay ku lahaayeen gobolkaas, isagoo howlgalkaas u bixiyey “Soo celinta sareynta Sharciga.”
Warbixin ay faafisay warbaahinta dawladda federaalka ayaa lagu sheegay in banaadirsom TPLF oo ay dowladda u aqoonsatay argagixiso, isla markaana ay kooxdu hor istaagtay gargaarkii la geyn lahaa gobolka Tigrey, kaas oo loo marin lahaa deegaanada ismaamulka Canfarta, kadib markii ay halkaas ka bilaabeen duqeyn culus.
“Sababta ay banaadirsom TPLF u diidan tahay xabad joojinta ay ku dhawaaqday dowladda dhexe ayaa ah in kooxdaan ay isku dayayso inay ku fidiso colaadda gobolka deriska la ah ee Canfarta,” ayaa lagu yiri warbixinta wakaalada wararka ee Itoobiya ay daabacday.
Getachew ayaa xaqiijiyay in Axadii cutubyo ka tirsan kacdoonka ay sidoo kale ka howlgaleen waqooyiga gobolka Amxaarada, halkaas oo todobaadkii la soo dhaafay saxafiyiinta wakaalada wararka ee AFP ay ku arkeen kumanaan maleeshiyo ah oo ka abaabulaya magaalooyinka xuduuda ah dagaal ka dhan ah banaadirsom TPLF.
Previous articleJurgen Klopp Oo Kashifay Wakhtiga Uu Ibrahima Konate – banaadirsom
Next articleQiimaha la iibiyo xoolaha nool ee Suuqyada Muqdisho oo cirka isku shareeray (Sawirro)